Ukuphupha umlinganiswa Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iimpawu zingafumaneka kwiimeko ezahlukeneyo kakhulu kunye neentsingiselo zombini ngokwenyani nakwinqanaba lephupha. Umzekelo, unokuphupha iimpawu zendlela, ezinje ngeempawu, okanye imiqondiso okanye imiqondiso ngezandla zakho. Okanye sizikrola abalinganiswa kwixolo lomthi ngokwethu.
Uphawu oluthile lomntu lunokubonwa njengophawu lomntu. Ukongeza, sinokufumana iisimboli ngohlobo lweelebhile kwimpahla, amanqaku akumgangatho, iilogo okanye uphawu lwentengiso.
Kithina baseYurophu, abalinganiswa baseTshayina okanye abama-Arabhu banokumela abalinganiswa abakhethekileyo. Inkqubo ye- ibaleki Banokubonakala njengabalinganiswa. Iya iba yimfihlakalo xa sibona oonobumba abafihlakeleyo okanye into ekhethekileyo. Kuba umntu ubonakala efuna ukufihla into apha.
Kwakhona, iziganeko ezibalulekileyo zinokubhengezwa ngemiqondiso okanye imiqondiso ethile. Nokuba umthunywa okanye umprofeti unokuqwalaselwa njengomqondiso.
Phambi kokuba siguqulele kutoliko jikelele "lomqondiso" wesimboli yamaphupha, masiqale sijonge kula maphupha anamava ikakhulu ngokunxulumene neempawu ebusuku.
1 Uphawu lwephupha «uphawu» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Amagama, iileta kunye neempawu kwihlabathi lamaphupha.
1.1.1 Intetho yezandla ephupheni: ngezandla neenyawo
1.1.2 Abalinganiswa baseTshayina bajongeka njengeempawu zamaphupha kum, ngoba?
1.2 Iimpawu ezingaqhelekanga ziyavela esibhakabhakeni. Uhlalutyo lwamaphupha
1.3 Umnqamlezo njengomfanekiso wephupha oqinileyo
1.4 Abalinganiswa bekhathuni ephupheni. Ithetha ntoni uMickey, uArielle kunye noLucky Luke!
2 Uphawu lwephupha «uphawu» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «uphawu» - ukutolika kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «uphawu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uphawu» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Amagama, iileta kunye neempawu kwihlabathi lamaphupha.
Intetho yezandla ephupheni: ngezandla neenyawo
Nabani na okhe wabona imiqondiso yezandla ephupheni labo ebisetyenziselwa ukunxibelelana nokunqwenela amava amatsha kunye nophuhliso ebomini babo. Inkqubo yesiqhelo yangoku, ukuma kumnandi. Abaphuphi bangathanda ukwandisa ubalo kunye nokuqokelela ulwazi ngakumbi.
Ezo mpawu zilula ephupheni, njengoko zisetyenzisiwe, umzekelo, ziintlobo ngeentlobo ukunxibelelana, akufuneki zibhidaniswe nolwimi lwezandla. Ukuba ubonile abantu abangakwaziyo ukuthetha okanye abazizithulu nabazizidenge besebenzisa olu hlobo lokuthetha ngezandla xa belele, kuya kufuneka unikezele ngoncedo lwakho kumntu ovela kwihlabathi elivukayo. Cinga ngokuba ngubani onokufuna uncedo ngoku. Ukuba uyazonwabisa ngaphakathi el mundo yamaphupha ngoncedo lweempawu, amaxesha osapho azolileyo ayeza.
Abalinganiswa baseTshayina bajongeka njengeempawu zamaphupha kum, ngoba?
Ukuba umlinganiswa waseTshayina ubonakala kumava ephupha, ngokuqinisekileyo omnye uya kubuza malunga nentsingiselo yawo emva kokuvuka. Ngaphandle kwesiTshayina, bambalwa kuphela abantu bamanye amazwe abathetha kwaye babhale olu lwimi kunzima ukulufunda. Rhoqo lo mqondiso ubonakalisa umnqweno wangaphakathi wokuphanda okungaziwayo. Into ekude kangaka ibonakala imnandi kakhulu kumphuphi; Inokuba luhambo olukude, into entsha kunye nokuzonwabisa engaqhelekanga, okanye ngamava nje angaqhelekanga.
Iimpawu ezingaqhelekanga ziyavela esibhakabhakeni. Uhlalutyo lwamaphupha
Ngaba amafu amnyama aqokelelana esibhakabhakeni? Ngaba ngequbuliso ungabona izibane ezingaqhelekanga esibhakabhakeni? Ngaba uyaduduza ephupheni? Abantu abaninzi abaleleyo bafumana izinto ezingaqhelekanga esibhakabhakeni. Ngale ndlela, i-subconscious ifuzisela umngcipheko olindele umphuphi kubomi bemihla ngemihla. Umntu ekuthethwa ngaye akayiphawulanga le meko iyingozi okwangoku, ke gcina amehlo akho evulekile! Ukuba uhoya, ungawuguqula umcimbi ube ngokuchaseneyo.
Umnqamlezo njengomfanekiso wephupha oqinileyo
Uphawu "lomnqamlezo" lwephupha kufuneka lutolikwe ngokwahluke kakhulu, kuxhomekeka kwimeko yephupha elinamava kunye (kunye nenkolo) intsingiselo yephupha. Ingathetha ukuba kuya kufuneka uzinyamezele kwaye uzincame. Kwangelo xesha, umnqamlezo ufuzisela "ukutshintsha" komphuphi ngengqondo yokomoya: okanye iimbono zakhe ziyatshintsha, ukholo luyomelela okanye lube buthathaka. Umnqamlezo ekhadini lokudlala umele amandla kunye namandla.
Abalinganiswa bekhathuni ephupheni. Ithetha ntoni uMickey, uArielle kunye noLucky Luke!
Umntu ohlekisayo obonwayo uhlala eyaziwa ngumntu ophupha ebuntwaneni; Kuyenzeka ukuba kwakamsinya ngaphambi kokuba iphupha likhuphe okanye likhehlekise elinomfanekiso wephupha. Nabani na odibana nomlinganiswa wekhathuni ephupheni ujongana nobuzaza bakhe. Mhlawumbi kungakuhle ukuhleka xa kusenzeka ingozi? Ukuba uhlala ufumana umntu osisiyatha emaphupheni akho, kuya kufuneka uzibuze, ngokuchaseneyo, ukuba unoluvo olwaneleyo loxanduva.
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kutolika "umqondiso" wesimboli yamaphupha njengesilumkiso kumphuphi ukuba angaphoswa nto ibalulekileyo ebomini bokuvuka. Kufanele ukuba ibe yindawo yakho ingqalelo Cinga ngako, kuba uya kuwabona ke amathuba akho ebomini.
Iimpawu esibhakabhakeni okanye iimpawu zeenkwenkwezi zinokubonwa njengephupha phambi komntu. imeko eyingozi lumkisa okanye ubhengeze iziganeko ezilungileyo. Ukuba ubona imiqondiso okanye iisimboli esantini ngelixa ulele, umntu othile kwihlabathi elivukayo kunokwenzeka ukuba uxele uthando lwabo kulowo kuthethwa ngaye. Ukuba iipowusta ezikwimo yemifanekiso zipeyintwe eludongeni ephupheni, uyakufumana umyalezo wothando.
Nabani na obona iimpawu ezithile emzimbeni ephupheni, ezinjengeempawu zokuzalwa okanye isiphako, uhlala enazo ebomini bokuvuka. Iimfihlakalo phambi kwabanye abantu. Ngokwesiqhelo ufuna ukukugcina kuwe oku. Ukuba uphawula abanye ngokuwangawangisa isandla sakho ngelixa ulele, kuya kufuneka usebenze ngakumbi ukulungiselela abanye kwihlabathi lokwenyani.
Umqondiso wendlela uhlala ekhomba imiqobo okanye njengomfanekiso wephupha. thintelo bonisa indlela aziva ngayo umphuphi ngokunxulumene nenkululeko yakhe yobuqu. Ngokubanzi, ukufundela okanye ukufundela xa ulele kuhlala kubonisa indlela abanye abantu ababona ngayo ubuntu bakho.
Ukuba ubona abalinganiswa okanye amanani ekhowudi ephupheni lakho, kuya kufuneka, phantsi kweemeko ezithile, uziqhelanise nale ikhoyo ngoku. imeko yobomi sebenzisa. Kuba apha izinto ezininzi zibonakala zingenakuchazeka. Umphuphi kufuneka ayitshintshe ngoku. Ukubona imiqondiso ye-zodiac okanye imiqondiso ye-zodiac ngexesha lokulala kuhlala kuyinto elungileyo kulowo uleleyo. Unokuba nexesha lokuchuma phambi kwakho.
Uphawu lwephupha «uphawu» - ukutolika kwengqondo
Ukusuka kwimbono yengqondo, imiqondiso ephupheni ubukhulu becala inentsingiselo efanayo naleyo yokwenene kwaye iinjongo zazo ikakhulu kukubonelela Umyalezo ongathandekiyo ukukrwela okanye ukugxininisa.
Ukuba umntu ufunda intetho yezandla ephupheni esikolweni, kufanele ukuba kwenziwe kwilizwe lokuvuka. amava amatsha vula ingqondo. Isicelo sokwandisa ulwazi sinokufihlwa ngasemva kweli phupha.
Umbono wokukhanya kwetrafikhi njengenkqubo yomqondiso inokuba liphupha lamaphupha ulungelelwano kwaye ucacise ubume. Ngokwenkcazo yamaphupha ezengqondo, umlingiswa wekhathuni kwikhathuni okanye ikhathuni ngelixa ulele ubonakalisa ikakhulu amava okhula ebuntwaneni.
Kwinqanaba elidlulayo lohlalutyo lwamaphupha, imiqondiso okanye amanqaku ephupheni anokuba njenga Amanqaku omphefumlo ukuba iqondwe. Umphuphi kufuneka ajongane nomyalezo ovela ezingqondweni zakhe kwaye mhlawumbi awuphumeze njengesikhokelo sokuvuka kobomi.